နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံး လွတ်မြောက်ရေး ဆန္ဒပြတောင်းဆို - လန်ဒန်
မြန်မာပြည်ရှိ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံး လွတ်မြောက်ရေးအတွက် လန်ဒန်ရှိ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေး လှုပ်ရှားသူများက ယမန်နေ့ (23.06.2011) နေ့လည်ပိုင်းတွင် စစ်အစိုးရ၏ သံရုံးရှေ့၌ လာရောက်ဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
Invitation to Waso Robe Offering Ceremony
သာသနရံသီဘုန်းကြီးကျောင်း၏ နှစ်စဉ်ကျင်းပမြဲဖြစ်သည့် ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်လှူပူဇော်ပွဲနှင့် ဆရာတော် ဦးဥတ္တရ၏ မွေးနေ့မင်္ဂလာကို ဇူလိုင်လ ၁၇ ရက် ၂၀၁၁ နံနက် ၁၀နာရီမှ ညနေ ၅နာရီထိ စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါသောကြောင့် လန်ဒန်ရှိ မိတ်ဆွေအပေါင်းအား ကုသိုလ်ယူတက်ရောက်နိုင်ကြပါရန် ခင်မင်လေးစားစွာဖြင့် ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။ အစီအစဉ်အသေးစိတ်ကို အောက်ပါ ပုံများကို ကြည့်ရှူ့နိုင်ပါသည်။
ဝါဆိုသင်္ကန်းတစ်စုံလျှင် ၃၅ပေါင်နှုန်းဖြင့် သာသနရံသီဘုန်းကြီးကျောင်း (+44 0208 2050 221) သို့ ဆက်သွယ်လှူဒါန်းနိုင်ပါသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ၆၆ နှစ်မြောက်မွေးနေ့ လန်ဒန်တွင် ကျင်းပပြီးစီး
ယနေ့ကျရောက်သော မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ၆၆ နှစ်မြောက်မွေးနေ့အခမ်းအနားကို NLD လွတ်မြောက်နယ်မြေ ယူကေဌာနခွဲမှ ဦးဆောင်ပြီး သာသနရံသီ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပပြီးစီးခဲ့ပါတယ်။ အခမ်းအနားအစီအစဉ် မနက်ပိုင်းတွင် သံဃာတော်များအား ဆွမ်းဆပ်ကပ်လှူဒါန်းခြင်းပြီး ကြွရောက်လာသော ပရိသတ်များကို မြန်မာရိုးရာအစားအစာများဖြင့် ဧည့်ခံကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။ နေ့လည်ပိုင်းအစီအစဉ်များအဖြစ် ဘာသာပေါင်းစုံမှ မွေးနေ့ရှင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အတွက် ဆုတောင်းပေးခြင်း၊ ကဗျာရွတ်ပြိုင်ပွဲ နှင့် ကျပန်စကားပြောပြိုင်ပွဲများကို ကျင်းပပေးခဲ့ပါတယ်။ သာသနရံသီဆရာတော် ဦးဥတ္တရ၊ NLD လွတ်မြောက်နယ်မြေ(ယူကေ)ဋ္ဌာနခွဲ၏ ဥက္ကဌ ဒေါက်တာဝင်းနိုင်၊ Burma Campaign - UK မှ Anna Roberts တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များမှ မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အမှာစကားများ အသီးသီးပြောကြာခဲ့ပါတယ်။ ထို့နောက် ပြိုင်ပွဲအသီးသီးတွင်ဆုရရှိသူများကို ဒေါက်တာဝင်းနိုင်မှ ဆုချီးမြှင့်ပေးခဲ့ပြီး ကမ္ဘာမကျေဘူး သီချင်းကို သံပြိုင်သီဆိုကာ အခမ်းအနားကို ညနေ ၅ နာရီခန့်တွင် အောင်မြင်စွာရုပ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် သံဃာတော်များအား ဆွမ်းကပ်မည်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် NLD-LA (UK) မှ ဦးဆောင်ပြီး သာသနရံသီကျောင်းမှ ဆရာတော်များကို ဆွမ်းဆပ်ကပ်လှူဒါန်းမည်ဖြစ်ပါသောကြောင့် လန်ဒန်ရှိမြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေး လှုပ်ရှားသူများနှင့် မိတ်ဆွေအပေါင်းအား လေးစားစွာ ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
Food Offering to Buddhist Monk
Multi-faith Pray, Collecting Supporting Signature, Karaoke Competition, Reading Poem
Time: 9:30 - 20:00
Venue: SASANA RAMSI VIHARA
83, Booth Road Colindale NW9 5JU Ph: 0208 2050 221
Protest to mark Aung San Suu Kyi’s 66th birthday 17th June 2011
Protest to mark Aung San Suu Kyi’s 66th birthday (19th Jun 2011)
The call for the release of all the political prisoners, to have genuine dialogue and national reconciliationin Burma.
Date : Friday 17 June 2011
Place: In front of the Burmese embassy in London, UK. You are cordially invited to join with us.
Time: 13:00 – 14:00 Friday 17 June 2011
Place: Myanmar/Burma Military Regime Embassy 19A, Charles St, London W1J 5DX.
Organiser: Burma democratic Concern (BDC)
Daw Aung San Suu Kyi’s Birthday Open Snooker Tournament (London,19th June)
Message By : BDC
Burma Democratic Concern (BDC) Open Snooker Tournament will be held on 19 June 2011 in honour of Daw Aung San Suu Kyi’s 66th birthday in London, UK. We would like to welcome everyone who got interest to participate with us. Food and Drink are not allowed to bring from outside since you can purchase drinks and snacks at the full service bar. The entry will be £10 per person and please register with us at the latest by 10 June 2011.
Date: 19.06.2011 (Sunday)Time: 12:00 – 20:00 pmAddress: ZAKI'S Snooker Palace, 88-90 1st Floor, Leytonstone Road, E15 1TQ
· From Maryland Train Station take bus 257/69 towards Walthamstow direction and get off at Chobham Road.
· From Stratford Station (Central, Jubilee or Over Ground) take 257/69 towards Walthamstow direction for5stops until Chobham Road where you get off.
· From Leyton Station (Central Line) take 257/69 towards Stratford Station direction until getting to Chobham Road.
· From Walthamstow, take bus …
Fund Raising for Disadvantage Children in BURMA
The Burmese Youth Assoaciation, UK cordially invites you on 18 of June, 2011 for our first anniversary celebration, which will be held at St. Agnes Church, 35 Cricklewood Lane, NW2 1HR. All kind of fresh Burmese food will be available at the event. Besides, there will be karaoke for those of you who love singing. On top of that, we shall play Dj after 9:30pm until 11:30pm. Lets us all enjoy together. PS. Pls kindly pass the message to ur friends.
Many thanks. BYA, UK
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ မိဘမဲ့ကလေးငယ်များနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသော ကလေးငယ်များအတွက် လိုအပ်သော ပညာရေးဆိုင်ရာ အခြေခံလိုအပ်ချက်များကို ကူညီထောက်ပံ့နိုင်ရန်အတွက် ကျွန်တော်များ BURMESE YOUTH ASSOCIATION ( BYA-UK ) မှ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ အခြေခံလိုအပ်ချက်ဖြစ်သော ကျောင်းသုံးစာအုပ်မှစ၍ ထိုင်ခုံနှင့် အမိုးအကာ၊ ဗဟုသုတ စုံလင်ပြည့်စုံစေရန် ကျောင်းစာကြည့်တိုက် အစရှိသည်တို့ကိုလည်း ဖြည့်တင်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။ မရှိမဖြစ်လိုအပ်လှသည့် သောက်သုံးရေအတွက် ရေတွင်း(အ၀ီစိ) များကိုလည်း တူးဖော်ပေးခဲ့ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ များပြားလှသော လိ…
HDR (High Dynamic Range) Photography စိတ်ဝင်စားသူတွေ အသုံးတည့်မည့် software တစ်ခုပါ။ HDR ဆိုတာ အတိုချုပ်ပြောရရင် အလင်းအမှောင်မတူညီတဲ့ ပုံသုံးခု (Normal, Overexposed and underexposed)ကို တစ်ခုတည်းပြန်လည်ပေါင်းစပ်ပြီး အသုံးပြုခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပုံကတော့ ခရီးသွားရင်း ကားထဲကနေရိုက်ထားတာပါ။ အဲဒါကြောင့် အလင်းပြန်မှုနည်းနည်းပါနေတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ Exposure မတူညီတဲ့ ပုံသုံခုကို Photomatix ထဲမှာ ပြန်လည်ပေါင်းစပ်ထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ကျကျ စမ်းသပ်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်ပါ Video Tutorial မှာလေ့လာပြီး လက်တွေ့စမ်းသပ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Photomatix Tutorial for Windows
Download here (32bit&64bit)
50th birthday celebration of Amnesty with Enfield & Barnet AI group
The Enfield and Barnet group would like to invite you toalocal 50th birthday celebration of Amnesty.
This will take place next Sunday 5th June from 10.00 AM to 2.00 PM at the Palmers Green Community Market, Aldermans Hill, N13 (Next to the Palmers Green Station).
We shall cutacake, holdaquiz, play music, and collecting signature petitions.
Do come and support us if you are near enough to North London.
Date: 5th June 2011 (Sunday)
Place:The Palmers Green Community Market, Aldermans Hill, N13.
(Next to the Palmers Green Station)
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံး လွတ်မြောက်ရေး ဆန္ဒပြတောင...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ၆၆ နှစ်မြောက်မွေးနေ့ လန်ဒန်တွင...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် သံဃာတော်များ...
Protest to mark Aung San Suu Kyi’s 66th birthday 1...
Daw Aung San Suu Kyi’s Birthday Open Snooker Tourn...
50th birthday celebration of Amnesty with Enfield ...